BR भनेको के हो? | Martech Zone परिवर्णी शब्द
Martech Zone » परिवर्णी शब्द » बी बाट सुरु हुने परिवर्णी शब्द	» BR
BR को संक्षिप्त रूप हो बाउन्स दर.
बाउन्स दरले तपाइँको वेबसाइटमा प्रयोगकर्ताले लिने कार्यलाई जनाउँछ। यदि तिनीहरू एक पृष्ठमा अवतरण गर्छन् र अर्को साइटमा जान छोड्छन् भने, तिनीहरू तपाईंको पृष्ठबाट बाउन्स भएका छन्। यसले ईमेललाई पनि सन्दर्भ गर्न सक्छ जुन इमेलहरूलाई जनाउँछ जुन इनबक्समा पुग्दैन। यो तपाईको सामग्रीको प्रदर्शनको KPI हो र उच्च बाउन्स दरले अन्य मुद्दाहरू बीचमा अप्रभावी मार्केटिंग सामग्रीलाई संकेत गर्न सक्छ।